<VaGaratia 5:16-26, 6:6-18>
“Zvino ndinoti kwamuri: Fambai noMweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Nokuti nyama inochiva ichirwa noMweya; noMweya uchirwa nenyama; nokuti izvi zvinorwisana; kuti murege kuita zvamunoda. Asi kana muchitungamirirwa noMweya, hamuzi pasi pomurayiro. Zvino mabasa enyama anoonekwa, anoti: Vupombwe, netsvina, novutere, nokunamata zvifananidzo, novuroyi nokuvengana, negakava, negodo, nekutsamwa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nokugodorana, nokubatwa, nokutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai; izvo zvandinokuvudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka yoVushe hwaMwari. Zvino chibereko choMweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, novunyoro, nokuzvidzora; hakunomurairo unodzivisa zvinhu zvakadai. Asi avo vari vaKristu Jesu vakarovera pamuchinjikwa nyama, pamwe chete nokuda kwayo, nokuchiva kwayo. Kana tichirarama noMweya, ngatifambevo noMweya, tirege kuzvikudza, tichimutsana moyo, tichigodorana.”
“Zvino unodzidziswa Shoko, ngaagovane neunodzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka. Musanyengerwa; Mwari haasekwi; nokuti izvo zvinodzvara munhu, ndizvo zvaanochekazve. Nokuti unodzvarira nyama yake, uchacheka kuvora, kunobva panyama; asi unodzvarira Mweya, uchacheka vupenyu hwusingaperi, hunobva kuMweya. Zvino ngatirege kuneta pakuita zvakanaka; nokuti tinozocheka nenguva yakafanira, kana tisingavori moyo. Zvino zvatine nguva, ngatiitire vose zvakanaka, zvikuru kunaveimba yekutenda. Tarirai kukura kwamaretere andinokunyorerai nawo noruwoko rwangu. Vose vanoda kunzi vakanaka pane zvinoonekwa panyama, ndivo vanokuroverai kuti mudzingiswe; vanodaro bedzi kuti varege kutambudzwa nokuda kwomuchinjikwa waKristu. Nokuti kunyange vakadzingiswa, havachengeti murairo vamene; asi vanoda kuti imi mudzingiswe, kuti vazvirumbidze panyama yenyu. Asi kana ndirini, ngandirege kutongozvirumbidza napaduku, asi bedzi mumuchinjikwa waShe wedu, Jesu Kristu; naye nyika yakaroverwa pamuchinjikwa kwandiri, neni ndakaroverwa kunyika. Nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu, asi chisikwa chitsva. Vose vanofamba nomurairo uyu, rugare ngaruve pamusoro pavo, nenyasha, napamusoro pavaIsraeri vaMwari. Kubvira zvino ngakurege kuva nemunhu unonditambudza; nokuti ndinamavanga aJesu pamuviri wangu. Nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu, ngadzive noMweya wenyu, hama dzangu. Ameni.”
Ko tinofanira kuita sei kuti tive
Tinofanira kuparidzira uye kutevedzera
MuApostiri Pauro akanyora pamusoro peMweya Mutsvene, mutsamba yake kuVaGaratiya. Muna VaGaratiya 5:13-14 akava nekuti, “Nokuti imi hama dzangu, makadanirwa kusununguka; asi kusununguka kwenyu ngakurege kuva nzira yenyama, asi batiranai norudo. Nokuti murairo wose unozadziswa neshoko rimwechete, rokuti: ‘Ude wekwako sezvaunozvida iwe.’”
Muchidimbu, shoko nderekuti, sezvo takave nekuponeswa uye nekudzikinurwa kubva kuzvivi, kuburikidza nokutenda kuevhangeri yakaisvonaka, hatifaniri kutora rusununguko urwu semukana wekuti tizviise mukuchiva kwenyama, asi kuburikidza norudo, tinofanira kubatirana, tichiva nekutevera evhangeri yakaisvonaka. Sezvo Mwari vakatiponesa kubva kuzvivi zvedu zvose, zvakafanira kuti tive nekuparidzira evhangeri. Pauro akativo, “Asi kana muchirumana nokudyana, chenjerai kuti murege kupedzana” (VaGaratiya 5:15).
Fambai noMweya kuti muve nekuzadzwa noMweya Mutsvene
Muna VaGaratiya 5:16, Pauro akati, “Zvino ndinoti: Fambai noMweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama.” Uyevo parugwaro 22-26, akati, “Zvino chibereko choMweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, novunyoro, nokuzvidzora; hakunomurairo unodzivisa zvinhu zvakadai. Asi avo vari vaKristu Jesu vakarovera pamuchinjikwa nyama, pamwe chete nokuda kwayo, nokuchiva kwayo. Kana tichirarama noMweya, ngatifambevo noMweya, tirege kuzvikudza, tichimutsana moyo, tichigodorana.” Pano, Pauro anotiudza kuti kana tikafamba noMweya, tinova nekubereka zvibereko zveMweya. Mweya Mutsvene unoda kuti tive nokufamba noMweya. Asi isu tinorarama panyama.
Isu vanhu tinozvarwa nenyama isingagoni kubereka chibereko cheMweya. Kunyangwe tikaedza kufamba noMweya, muzvarirwo wedu haugoni kushandurika. Ndiko kusaka avo badzi vakagamuchira kugara kweMweya Mutsvene, kuburikidza nekudavira kuevhangeri yakaisvonaka, vachigona kufamba noMweya, uye vachiva nekubereka chibereko cheMweya.
Kana Bhaibheri richitiudza kuti tifambe noMweya, zvinoreva kuti tinofanira kuparidzira evhangeri yakaisvonaka kuitira kuti vamwe vagonevo kuregererwa pazvivi zvavo. Kana tikararamira evhangeri yakaisvonaka iyi, tinova nekubereka chibereko cheMweya. Mune mamwe manzwi, haisi nyaya yekushandura muzvarirwo wemunhu. Kana tichifamba neevhangeri yakaisvonaka iyi, tinogona kubereka zvibereko zveMweya, zvinoti; rudo, rufaro, rugare, moyo munyoro, kunaka, kutendeka, vunyoro, nokuzvidzora. Zvibereko zveMweya zvinotibatsira kuti tive nokuponesa vamwe kubva pazvivi zvavo, kuti vave nehupenyu husingaperi.
Kuchiva kwenyama kuchipikisana nezvido zveMweya
Pauro akati, “Nokuti nyama inochiva ichirwa noMweya; noMweya uchirwa nenyama; nokuti izvi zvinorwisana; kuti murege kuita zvamunoda” (VaGaratiya 5:17). Sezvo isu, takave nekudzikinurwa, tiine kuchiva kwenyama, neMweya, panguva imwechete, zvinhu zviviri izvi zviri pakupikisana nguva dzose. Mhedzisiro ndeyekuti, hapana chimwe chezviviri izvi chingagona kuzadza moyo yedu zvakakwana.
Mweya unotitungamira kuti tive nekushuwira kuparidzira evhangeri yakaisvonaka, kubva pakadzika pemoyo yedu, uye nekushumira Ishe. Zvinotiita kuti tive nekufaranuka, kana tikabatira mumabasa emweya. Zvinotibatsira kuti tive nokuponesa vanhu kubva kuzvivi zvavo, kuburikidza nokuparidzira evhangeri yakaisvonaka yaMwari.
Asi nokune rumwevo rutivi, zvishuvo zvedu zvinomutsa kuchiva kwenyama, zvinoita kuti titadze kufamba noMweya. Uku ndiko kupokana kusingaperi kuri pakati peMweya nekuchiva kwenyama. Kana munhu akabatwa nekuchiva kwenyama, anoguma ava kupa nzvimbo kunyama. Nyama inoronga zvishuvo zvayo, izvo zvinopikisana noMweya. Izvi zvinopikisana, zvekuti tinogona kutadza kutoita zvinhu zvatinenge tichishuva.
Saka kufamba noMweya kunombosanganisira zvipi? Uye ndezvipi zvinhu zvinove nekufadza Mwari? Mwari vakataura kuti, kuparidzira pamwe nekutevedzera evhangeri yakaisvonaka, ndiho hupenyu hwekufamba noMweya. Vanova nekupa moyo yekufamba noMweya kune avo vane kugara kweMweya Mutsvene, kuitira kuti vagona kurarama hupenyu hwemweya. Murairo watakapiwa naMwari, wokuti tiite zvibereko zveMweya, kuburikidza nokufamba noMweya, waiva yambiro uye iri rayiro yekuti tive nekuponesa vamwe kubva kuzvivi zvavo, kuburikidza nekuparidzira evhangeri yakaisvonaka. Kufamba noMweya Mutsvene zvinoreva kurarama hupenyu hunofadza kuna Mwari.
Kuti tive nekufamba noMweya, tinofanira kutanga tava nekugara kweMweya Mutsvene. Tinofanira kutanga tave nekudavira kuevhangeri yakaisvonaka iyo yatakapiwa naMwari, kana tichishuva kugamuchira Mweya Mutsvene uyo anogara matiri. Kana tisingadaviri kuevhangeri yakaisvonaka, mukati memoyo yedu, hatingavi nekugamuchira kugara kweMweya Mutsvene, kana kuwana kuponeswa kubva kuzvivi, izvo zvinoreva kuti hatizokwanise kuva tinofamba noMweya.
Mweya unotipa chishuvo chekuparidzira evhangeri yakaisvonaka, chekuti tishumire Ishe, uye tigounza kubwinya kuna Mwari. Chishuvo ichi chinobva pamoyo uyo wakazvipikira kuna Mwari, uye pakuparidzira evhangeri yakaisvonaka kunyika yose. Chinobvavo pamoyo uyo une chido chekuita chipi zvacho chazvingatora kuti tiparidzire evhangeri yakaisvonaka. Avo vanodavira kuevhangeri yakaisvonaka, uye vakagamuchira Mweya Mutsvene, mushure mekuregererwa pazvivi zvavo, vanokwanisa kufamba noMweya uye kuzvipira pakuparidzira evhangeri. Iyi ndiyo nhaka yavo yemweya inobva kumusoro.
Avo vane kugara kweMweya Mutsvene vanova nekuterera Mweya Mutsvene, vagova nekufamba noMweya, kunyange zvazvo vachiri nekuchiva kwenyama, nokuda kwekuti Mweya Mutsvene anogara mukati mavo. Pauro akati, “Fambai noMweya Mutsvene.” Zvaaireva mukudaro ndezvekuti tinofanira kuparidzira evhangeri yakaisvonaka yemvura noMweya Mutsvene, iyo yatakapiwa naJesu, kuti tive nokubatsira vamwe kuti vave nekuregererwa pazvivi zvavo.
Dzimwe nguva, apo tichifamba muMweya, tinova nekufamba panyama. Kuchiva kwenyama, nezvido zveMweya zvinorwisana muupenyu hwedu, asi chatinofanira kuziva, pamwe nekuona zvakanyatsojeka, ndechekuti avo vane kugara kweMweya Mutsvene vanofanira kurarama hupenyu hwavo vachifamba noMweya. Tinogona kurarama hupenyu huzere noMweya Mutsvene kuburikidza nenzira iyi badzi. Kana avo vane kugara kweMweya Mutsvene vakaramba kuita zvibereko zveMweya, vanoguma vaparara, kuburikidza nokuita zvibereko zvenyama. Zvibereko zvavo zvinoparara, uye zvinosuwisa. Mukati mezvizvi mune chikonzero chekuti tirarame kuburikidza nekufamba noMweya.
Takanzwa kuti “Fambai noMweya,” asi vamwe vedu vanogona kufunga kuti “Ko ndingagona sei kudaro, kana ndisingavi nekunzwa Mweya Mutsvene mukati mangu?” Vamwe vedu vanofunga kuti tinokwanisa badzi kuona kugara kweMweya Mutsvene kana Mwari vakazviratidza, uye vakava nekutaura kwatiri pauzima. Asi uku kusanzwisisa. Mweya unotipa chido chekuti tive nekuraramira evhangeri yemvura noMweya.
Panogona kuva nenguva dzatinova nechokwadi chekuti anogara mukati medu, asi tisingagoni kumunzwa, nekuda kwekuti tinenge tichifamba panyama. Vamwe vanokwanisa kufunga kuti akatorara mukati medu. Ava ndivo vakagamuchira Mweya Mutsvene, asi vachiri nokufamba nenyama.
Ava vanhu vanongova nekutandadza nyama yavo badzi, uye vachiita sezvainoreva, asi vachizotambudzika kumugumo, nekuda kwezvido zvenyama zvinoramba zvichiwedzera. Kunyangwe neavo vane kugara kweMweya Mutsvene vane chiwanzo chekurarama pakuchiva kwenyama, nekuda kwekuti vanofunga kuti kurarama kwakadaro ndiko kwemuzvariro. Asi avo vanozviisa pasi penyama, nekuda kwekudaro, vanobva vave varanda venyama.
Ishe vanotiudza kuti tirarame sezvinobva paMweya. Izvi zvinoreva kushumaira evhangeri yakaisvonaka. Zvinorevavo kuti tinofanira kuzvipira pachedu, zvakakwana, kuevhangeri yakaisvonaka yemvura noMweya. Kurumbidza muevhangeri, uye kurarama nayo, ndiko kurarama sezvinoreva Mweya. Tinofanira kurarama saizvozvo, kuburikidza nekudzidza zvazvinoreva kuti kufamba noMweya. Ko uri kufamba noMweya here?
Ko munhu asina kugara kweMweya Mutsvene angagona kufamba noMweya here?
Avo vasina kuzvarwa patsva havazive kuti zvinorevei kuti kufamba noMweya. Saka, vanhu vazhinji vanoedza kugamuchira Mweya Mutsvene, uye vachiumirira kuburikidza nemaitiro avo pachavo. Vanofunga kuti chiitiko chekudokwairira Mweya Mutsvene chakafanana nechekuva nekuzadzwa noMweya Mutsvene.
Semuenzaniso, kana vanhu vaungana mune mamwe makereke kuti vanamate, mufundisi anonamata nenzwi guru, vanhu vose vobva vatanga kudanidzira zita raShe. Vamwe vavo vanotaura nendimi sekunge vakazadzwa noMweya Mutsvene, asi hapana kana noumwe, kunyangwe ivo pachavo, anogona kunzwisisa zvavanenge vachitaura. Zvichakadaro, vamwe vavova nekudonhera pasi, uye miviri yavo ichibva yatanga kubvunda nesetswa. Zvechokwadi, vakave nekugarwa nemadhimoni, asi vachifunga kuti vakagamuchira Mweya Mutsvene. Panozobva zvino pachiuya bopoto, apo vanhu vanenge vachiita mhere, vachiti, “Ishe, Ishe!” Vanodeedza kunaShe, vachiyeredza misodzi, nekuwuchira maoko avo. Fani iyi inowanzodeedzwa kuti “kuva nekuzadzwa noMweya Mutsvene.”
Mufundisi anobva ataura nendimi apo achirova rova papurupiti, uyevo vanhu vanobva vadeedzera vachiti “Ishe! Ishe!” Vanofarira mamiriro aya kwazvo, uye vamwe vanobva vatotaura kuti vave nekuona chiratidzo chemuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa, muBindu reEdeni, uyevo nekuona chiso chaJesu, pavanenge vari mushishi mekudzimaidzwa kusiri kutsvene kwavo uku. Vanokarakadza, zvisiri izvo, zvinhu izvozvo senzira dzokugamuchira Mweya Mutsvene nadzo, kuti vazadzwe naye, uye kuti vafambe naye. Mabasa avo aya, asina gwara, anobva pamazano avo asina kutsarukana, pamusoro peshoko raMwari, noMweya Mutsvene.
“Fambai noMweya.” Izvi ndizvo Mwari vanotaurira kune avo vanozvarwa patsva. Zvinoreva kuita zvinhu izvo zvinofadza kwavari. Pauro akaenzanisa mabasa enyama nechibereko cheMweya Mutsvene. Akava nokuti, “Zvino chibereko choMweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, novunyoro, nokuzvidzora; hakunomurairo unodzivisa zvakadai” (VaGaratia 5:22-23).
“Kufamba noMweya” zvinoreva kuparidzira evhangeri yakaisvonaka, nokuponesa vamwe kubva pazvivi zvavo. Kana tikava nokudaro, tinokwanisa kuita zvibereko zvoMweya. Zvibereko zvoMweya ndozvinoti rudo, rufaro, rugare, moyo murefu, moyo munyoro, kunaka, kutendeka, vunyoro, kuzvidzora; tinova nokukwanisa kuita zvibereko izvi kana badzi tave nokurarama neevhangeri yakaisvonaka. Kana munhu akashumaira pamwe nokuparidzira evhangeri yakaisvonaka, achizvipira kwairi, anobva ave nokurarama hupenyu hwepamweya huzere noMweya Mutsvene.
Sechibereko choMweya, “kunaka” zvinoreva kuita mabasa akanaka. Zvinorevavo kuti tsika dzakanaka. Kuchengetedza tsika dzakanaka paevhangeri yakaisvonaka, uye kuita chimwe chinhu chinobatsira vamwe, ndiko kunaka. Kunaka kwakanyanyokura mumeso aMwari, ndiko kuparidzira evhangeri kuti vamwe vave nekubatsirika.
Uye, kuti “moyo munyoro” zvinoreva kunzwira vamwe tsitsi. Uyo ane tsitsi kune vamwe, achiva nokushumaira evhangeri aine moyo murefu uyevo nemoyo munyoro, achava parugare. Uyo unofamba noMweya unofara kuona basa raShe richizadzikiswa, ane rudo nekuita basa ravo, anoda vamwe, uye akatendeka muzvinhu zvose. Kunyangwe pasina munhu akavapa chinangwa chemanikidzo chekudaro, avo vane kugara kweMweya Mutsvene vakatendeka mubasa ravo, kudzamara rave nokuzadzikiswa. Vane hunyoro, uye vanochengetedza kuzvidzora. Vane chibereko choMweya. Munhu ane Mweya Mutsvene mukati make anofanira kufamba noMweya. Kana badzi ave nokudaro, ndiko kuti ave nokukwanisa kuita chibereko choMweya.
Unogonavo, zvakare, kuita chibereko choMweya kana ukave nokufamba noMweya. Asi kana ukasadaro, unopedzisira wave kufamba nokuchiva kwepanyama. Magwaro anoti, muna VaGaratia 5:19-21, “Zvino mabasa enyama anovonekwa, anoti: Vupombwe, netsvina, novutere, nokunamata zvifananidzo, novuroyi, nokuvengana, negakava, negodo, nokutsamwa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nokugodorana, nokubatwa, nokutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai; izvo zvandinokuudza zvino, sezvandakambokuudza kare, kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka yoVushe hwaMwari.”
Mabasa enyama ane huchapupu
Mabasa enyama ane huchapupu. Basa rokutanga renyama ndiro “revupombwe,” izvo zvinoreva kuti kuita ukama husakafanira hwemunhurume nomunhukadzi. Rechipiri ndiro “vutere.” Rechitatu ndiro “hutsvina.” Rechina ndiro “umhondo,” zvinoreva kuti ruchiva. Rechishanu ndiko “kunamata zvifananidzo,” izvo zvinoreva kuti kushumira zvifananidzo, pachinhambo chaMwari. Rechitanhatu ndiro “vuroyi.” Rechinomwe ndiko “kuvengana.” Kana munhu asina Mweya Mutsvene akafamba panyama, haangatogoni, asi kutongoratidza ruvengo rwake kune vamwe, sezvinoenderana nemuzvarirwo wake wokutadza. Rechisere ndiro “gakava.” Izvi zvinoreva kuti, kuita bopoto neshamwari, kana vemhuri, dzedu. Mamwe acho ndeanoti “godo, nokutsamwa, nekupesana.” Zvose izvi zviratidzo zvevanhu avo vanofamba nenyama.
Rechigumi ndiro “kuparadzana.” Kana munhu achifamba sezvinobva panyama badzi, hazvingagoneki kuti ave nekuita basa rekereke, uye nokuda kwekudaro, anoguma ave kusiya kereke, nepakuda kwake. Rechigumi nerimwe ndiro “dzidziso dzakatsauka.” Uyo anofamba nenyama anoita saizvozvo kuti ave nekugutsa kuda kwake pachezvake. Asi hupenyu ihwohwo hwakasiyana kwazvo nechido chaMwari, zvekuti anobva ave nekusiya evhangeri yakaisvonaka, nokuda kwekudaro. Dzidziso dzakatsauka, zvinoreva kuti kubva pazvokwadi yeBhaibheri. Hakunomunhu, uyo ane kutenda kushoko raMwari uye achifamba noMweya, angave nokusiya kuda kwaMwari. “Kugodorana, nokubatwa, nokutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai,” ndiwo mabasa enyama. Avo vanofamba sezvinobva panyama badzi, vanova nekuita zvinhu izvi, pamugumo. Ndiko kusaka Ishe vachitaura kuti, “Fambai noMweya.” Isu, avo vakazvarwa patsva, tinofanira kufamba noMweya.
Avo vasina kuzvarwa patsva havana chinhu, asi kuchiva kwenyama, mumoyo yavo. Ndiko kusaka vachiva nekuita “vutere, hutsvina, umhondo uye nekunamata zvifananidzo.” Vafundisi venhema, avo vasina kuzvarwa patsva, vanoita “vuroyi” kuvateveri vavo, kuti vave nekuvakwezva kuti vape mari yakawanda. Vanopa mabasa akakosha, nezvinzvimbo zvakakwirira zvemukereke, kune avo vanopa zvizhinji. Avo vanorarama nenyama vanoratidza “ruvengo” rwavo kune vamwe. Vanova nekupesanisa makereke, kuaita masangano mazvinji, uyevo vachizvikudza pamasangano avo pachavo, vachiva nekunenera vamwe sevadzidzisi vezvakatsaukara. “Gakava, negodo, nokutsamwa, nokupesana, nokuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nokugodorana. Zvimwechetezvo zvinove nokudaro kwatiri vatsvene kana tikafamba sezvinobva panyama.
Mweya anoita kuti vaKristu vakazvarwa patsva vave nekuita zvibereko zvoMweya Mutsvene
Avo vakave nekuzvarwa patsva vanofanira kuraramira kuparidzira evhangeri yakaisvonaka. Sezvo zvakaoma kwazvo kuti tive nekutevera Ishe tiri tega, tinofanira kuita basa rokushumaira evhangeri yakaisvonaka, kuburikidza nokujoina kereke yaMwari. Tinofanira kunamata pamwechete, uye kuzvipira simba redu pakuti tive vanhu vanofamba neevhangeri yakaisvonaka yeMweya. Vanhu vanofamba noMweya vanova nekuraramira kuparidzira evhangeri yemvura noMweya. Mune mamwe manzwi; kufamba sezvinobva panyama zvinoreva kurarama hupenyu hwepachezvako badzi, uye kufamba noMweya zvinoreva kushandira kuti moyo yevamwe iponeswe. VaKristu vazhinji, vakazvarwa patsva, vanorarama mhando yehupenyu hwakaisvonaka uhu. Vanoraramira kunaka kwevamwe.
Pane vanu vazhinji kwazvo, vakapoteredza nyika yose, vasati vanzwa evhangeri yakaisvonaka. Tine rudo nevanhu vari kuAfrica neAsia. Tinoda vanhu vose vari kuEurope nekuAmerica, pamwe neavo vari kuzvitsuwa zvechiunde. Tinofanira kuratidza rudo rwedu kuburikidza nekuvasuma kuevhangeri yemvura noMweya.
Tinofanira kufamba noMweya. Hakuna murairo unodzivisa izvi. “Zvino chibereko choMweya ndirwo rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, novunyoro, nokuzvidzora; hakunomurairo unodzivisa zvakadai” (VaGaratia 5:22-23). Pane here murairo ungave nokudzivisa izvi? Kwete. Uyu ndiwo murairo weMweya uyo watinofanira kutevedzera. Pauro wakatiudza kuti tifambe noMweya. SaIshe wedu zvaakapira upenyu hwake kuitira isu vatadzi, tinofanira kuparidzira evhangeri kune vamwe. Kuponesa vamwe kubva pazvivi zvavo ndiko kufamba noMweya. Tinofanira kufamba noMweya.
Pauro wakati, muna VaGaratia 5:24-26, “Asi avo vari vaKristu Jesu vakarovera pamuchinjikwa nyama, pamwechete nokuda kwayo, nokuchiva kwayo. Kana tichirarama noMweya, ngatifambevo noMweya, tirege kuzvikudza, tichimutsana moyo, tichigodorana.” Tinofanira kuraramira kuti tiponese moyo yakarasika, kana tichifanira kurarama muMweya. Tinofanira kuita basa reMweya, tigova nekufamba naye. Mweya Mutsvene, uyo watakapiwa naMwari, anotitungamira kuti tive nekurarama naJesu Kristu mukati memoyo yedu. Mweya Mutsvene ndiye Mambo verudo. Mwari vanotishandisa sezvifambiso zverudo rwavo.
Pauro akati, “Avo vari vaKristu Jesu vakarovera pamuchinjikwa nyama, pamwechete nokuda kwayo, nokuchiva kwayo” (VaGaratia 5:24). Akatauravo kuti avo vakazvarwa patsva vakave nokufa pamwe naJesu Kristu. Avo vakazvarwa patsva, zvomene, vakatofa naJesu nechekare. Hative nekuzviona, asi takave nekufa naJesu Kristu apo akaroverwa kuti aripire zvitadzo zvedu. Mune mamwe manzwi, zvokwadi yokuti Jesu Kristu akaroverwa, inoreva kuti iwe neni takafa pamwe naye paMuchinjikwa. Kufa kwake kwaiva kufa kweduvo, uye kumuka kwake kunosimbaradza chivimbiso chekuzomutswavo kwedu. Iwe neni tinorarama, tichizova nokufa, muna Jesu Kristu, kuburikidza nokutenda kwedu. Tinofanira kuva nokutenda. Kutenda kwedu kunotitungamira kuti tive nokufamba noMweya.
Mwari vakatipa simba rokuti tifambe noMweya. Naizvozvo, isu takave nokuregererwa pazvivi zvedu zvose tinofanira kufamba noMweya. Avo vakave nokugamuchira Mweya Mutsvene vanofanira kutenda kuti zvivi zvavo zvakaregererwa, vagova nekuzvipikira pakuparidzira evhangeri yakaisvonaka, kuitira kuponeswa kweavo vakarasika. Kunyangwe zvazvo munhu achiregererwa pazvivi zvake uye achiva nokuzvarwa patsva, anova nokuparadzaniswa kubva kukereke yaShe, uye achiva nokutadzikara kumushumira, kana akararama sezvinobva pakuchiva kwenyama. Iwe neni tinofanira kurarama kuburikidza neevhangeri yemvura noMweya, kusvikira paZuva raShe Jesu Kristu.
Usambofe wakazvikudza, asi rarama nekuzadzwa kweMweya Mutsvene
Pauro akati, “Tirege kuzvikudza, tichimutsana moyo, tichigodorana.” Ko chii chinonzi kuzvikudza? Kuva nekufamba sezvinobva pakuchiva kwenyama. Pane vanhu vazhinji, munyika muno, vanoraramira kukudzwa kwavo pachavo. Vanhu vazhinji vanounganidza mari, vanoshingairira kuwana masimba makuru, vanoda kunaka kwenyika, uye vanoraramira zvepano nezvaikezvino. Mune izvi hamuna kutendeka, uye zvichave nekuwora pamwe nekushaikwa, mukufamba kwenguva. Ndiko kusaka vanhu vanofamba sezvinobva panyama vachiva nokunzi vanozvikudza. Kunyangwe kana vanhu vaine pfuma, mumoyo mavo mune rugare nekugutsikana kwechokwadi here? Chibereko chenyama chinova nekuwora, pamugumo. Zvinhu zvenyika hazvina maturo kumoyo yevanwe, uye zvingori zvemunhu pachezvake badzi. Zvakangonakira panyama yemunhu pachezvake badzi.
Bhaibheri rinoti, “Mumwe uri’ko unoparadzira, achiwedzerwa; Vuye uri’ko unonyima zvaakafanira kupa, asi zvinongomushaisa” (Zvirevo 11:24). Avo vasina kuzvarwa patsva vanoedza, zvakadzama, kunyima mari. Havana nzvimbo mukati mavo yekuti vave nekutaririra vamwe, nokuda kwekuti zvinhu zvenyika zvinoreva zvinhu zvose kwavari. Ndiko kusaka vachingoda badzi kutaririra hupenyu hwavo pachavo. Asi zvinotaurwa muBhaibheru, kuti uriko unonyina zvaakafanira kupa, asi zvinongomushaisa. Vanhu vanofamba sezvinobva pakuchiva kwenyama, asi mhedzisiro yakafanana nokusangana nembavha, uchizova nekuguma wafa. Zvinhu zvose izvi imhedzisiro yekuzvikudza.
Avo vanoda kutevera zvido zveMweya
Pauro aida kurarama hupenyu hwemuMweya. Uye akave nokudaro. Akatidzidzisa kuti tirarame zvakanaka kuburikidza neshoko raMwari. Akati, muna VaGaratia 6:6-10, “Zvino unodzidziswa shoko, ngaagovane neunodzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka. Musanyengerwa; Mwari haasekwi; nokuti izvo zvinodzvara munhu, ndizvo zvaanochekazve. Nokuti unodzvarira nyama yake, uchacheka kuvora, kunobva panyama; asi unodzvarira Mweya, uchacheka vupenyu hwusingaperi, hunobva kuMweya. Zvino ngatirege kuneta pakuita zvakanaka; nokuti tinozocheka nenguva yakafanira, kana tisingavori moyo. Zvino zvatine nguva, ngatiitire vose zvakanaka, zvikuru kunaveimba yekutenda.”
Paura akayambira avo vanoziva shoko raMwari kuti vagoverane zvinhu zvose zvakanaka nevadzidzisi vavo. Zvaaireva pakuti “zvinhu zvakanaka” zvaiva zvekufadza Ishe, kuburikidza nokuponesa moyo yakarasika, kuburikidza nohupenyu hwokufamba noMweya, uye hwokuparidzira evhangeri. Avo vakazvarwa patsva vanofanira kujoina avo vanodzidzisa pamwe nokufamba noMweya, vaine ndangariro dzimwechete, rudo rumwechete, uye kutongwa kumwechete.
“Ngaagovane neunodzidzisa pazvinhu zvose zvakanaka.” Kuti zvinhu zvakanaka, zvinoreva kuti kuponesa vamwe kubva pazvivi zvavo, kuburikidza nekereke. Pauro akatiudza kuti tiite zvinhu zvose mundangariro imwechete, mumunyengetero umwechete, uye mukuzvipira kumwechete. Tinofanira kuita basa raShe tiri pamwechete.
Pauro akati, “Musanyengerwa; Mwari haasekwi; nokuti izvo zvinodzvara munhu, ndizvo zvaanochekazve.” Pano, kuti “kuseka” zvinoreva kuti “kunyomba kana kumhura.” Saka, kuti “Musanyengerwa, Mwari haasekwi” zvinoreva kuti musanyomba, uye kumhura, Mwari. Semuenzaniso, munhu haafanire kutora mashoko aMwari zvakareruka, achiva nekuashandurira mumashoko ake pachake, uye achiva nekutadza kudavira kwaari. Pauro akati, “Nokuti izvo zvinodzvara munhu, ndizvo zvaanochekazve.” Izvi zvinoreva kuti uyo unodzvara nyama unokohwa kuwora, asi uyo unodzvara Mweya unokohwa hupenyu husingaperi.
Ko tichave nekukohwei, kana tikararama neevhangeri yakaisvonaka yemvura noMweya? Tichave nekuwana hupenyu husingaperi, uye kuponeswa pazvivi zvedu. Tichave nekukohwa chibereko cheMweya, kuburikidza nokutungamirira moyo yevamwe kurudzikinuro rwepazvivi zvavo, uye kuupenyu husingaperi kuburikidza nemaropafadzo aMwari.
Ko avo vanhu vanoraramira nyama yavo kei? Vanova nokukohwa kuwora, uye hakuna chimwe kunze kwerufu, pamugumo. Hapana chavanenge vasarirwa nacho, mushure mekufa kwavo. Munhu anozvarwa asina chinhu, uye anova nekufa asina chinhu.
Kana akaita basa rokuponesa vamwe kubva pazvivi zvavo, vanova nekukohwa chibereko choMweya, vagova nehupenyu husingaperi. Asi kana akaramba achifamba sezvinobva pakuchiva kwenyama, anoguma ava kukohwa kuwora. Anobva akohwa kutukwa, agova nekutambidza kutukwa uku kune vamwe. Naizvozvo, Pauro, uyo aiziva zvose pamusoro pekurarama nokutenda, akatiyambira kuti tisafamba sezvinobva pakuchiva kwenyama.
“Zvino ngatirege kuneta pakuita zvakanaka; nokuti tinozocheka nenguva yakafanira, kana tisingavori moyo.” Pauro aiva muranda waMwari, uyo akafamba noMweya. Kana vanhu vachiona, muBhaibheri, kuti akafamba noMweya, vamwe vanogona kufunga kuti Mweya Mutsvene waimurayira mbune kuti aite zvakaita sekuti, “Pauro, tsaukira kuruboshwe kwako, ugosangana neumwe munhu” kana kuti “Unofanira kuzvidzivirira pamunhu uyoyo.” Asi ichi hachisi chokwadi.
Akafamba noMweya kuburikidza nokuparidzira evhangeri yeruponeso kune vamwe, uye kubatsira kuti moyo yavo iponeswe. Pauro akavavo nekushumira Ishe kuburikidza nokubatana pamwe neavo vakafambavo noMweya. Pakati pevaKristu, pane vanhu vasingafambi noMweya, asi vanofamba sezvinobva pakuchiva kwenyama. Havana kugamuchira Pauro, asi vakamupikisa, uyevo nokumufumura. Pauro akati haadi chinhu chipi zvacho chine chekuita neavo vakarwisa vachipikisana, nekufumura, vadzidzi vaJesu Kristu.
Kana uchida kufamba noMweya, unofanira kurarama neevhangeri. Pauro, uyo aiva akadzingiswa, nokupomerwa. Muna VaGaratia 5:11, inoti, “Asi ini, hama dzangu, kana ndichiparidza kuti vanhu vadzingiswe, ndinoramba ndichitambudzwa neiko? Naizvozvo kugumbusa kwoMuchinjikwa kwabviswa.” Vakadzingiswa ndivo avo vairwira kuitwa kwekudzingiswa, vachiti, “Kunyangwe kana munhu akazvarwa patsva, nekutenda kuna Jesu, anofanira kudzingiswa. Kana asina kudzingiswa panyama yake yepamberi, haasi mwana waMwari.” Ko vakamutambudzirei? Pauro aidavira kuti kudzikinurwa, pamwe neropafadzo yeupenyu husingaperi, zvakabva pakutenda kubhapatidzo yaJesu neropa rake paMuchinjikwa, badzi. Izvi ndizvo zvaaiparidzira.
Kutenda kunoita kuti vanhu vave vakarurama, kunobva pakudzidza zvokwadi, uye nokuiparidzira. Pauro akatora zvokwadi yemvura noMweya kuva yakakosha kwazvo. Aidavira kuti avo vaiziva zvokwadi vaikwanisa kufamba noMweya, uyevo kuti pakanga pasina basa nokudzingiswa. Izvi ndizvo zvaakaparidzira. Asi avo vakadzingiswa vaidavira kuti kudzingiswa chaiva chikamu chakakosha chekutenda kwemunhu, mukuponeswa. Asivo, hakune imwe evhangeri, kunze kweiyo yakadzikiswa naMwari, uye naizvozvo, hatifaniri kuwedzera kwairi kana kutapudza chipi zvacho kubva kwairi.
Apo Pauro akafamba noMweya, vanhu vakasiyana naye, akave nekutambudzwa nevamwe vake vechiJuda. “Vose vanoda kunzi vakanaka pane zvinovonekwa panyama, ndivo vanokurovererai kuti mudzingiswe; vanodaro bedzi kuti varege kutambudzwa nokuda kwoMuchinjikwa waKristu. Nokuti kunyange vakadzingiswa, havachengeti murairo vamene; asi vanoda kuti imu mudzingiswe, kuti vazvirumbidze panyama yenyu. Asi kana ndirini, ngandirege kutongozvirumbidza napaduku, asi bedzi mumuchinjikwa waShe wedu, Jesu Kristu; naye nyika yakaroverwa paMuchinjikwa kwandiri, neni ndakaroverwa kunyika. Nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu, asi chisikwa chitsva.” (VaGaratia 6:12-15). Uyevo, Pauro akati kune avo vakadzingiswa, “Vose vanoda kunzi vakanaka pane zvinovonekwa panyama, ndivo vanokurovererai kuti mudzingiswe; vanodaro bedzi kuti varege kutambudzwa nokuda kwoMuchinjikwa waKristu.”
Pauro akarayidza avo vaifamba sezvinobva pakuchiva kwenyama. Vaifamba sezvinobva pakuchiva kwenyama muzviito, uye paiva nevanhu vazhinji vaiva vakaita savo. Asi Pauro akagumisa hukama hwake navo. Pauro akati, “Asi kana ndirini, ngandirege kutongozvirumbidza napaduku, asi bedzi mumuchinjikwa waShe wedu, Jesu Kristu.” Jesu Kristu akave nokubhapatidzwa naJohane, kuti zvivi zvose zvenyika zvive nokutorwa, uye akafira paMuchinjikwa kuti aponese Pauro, pamwe nevanhu vose vakawanda sekudana kunoitwa naShe, Mwari vedu. Pauro akati, “Naye nyika yakaroverwa paMuchinjikwa kwandiri, neni ndakaroverwa kunyika. Nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu, asi chisikwa chitsva.” Pauro; uyo aiva akafa, kunyika, akararama zvakare, kuburikidza naJesu Kristu.
Zvamazvirokwazvo, takafa muna Jesu Kristu. Asi dzimwe nguva tinokanganwa zvokwadi iyi. Tinofanira kuzvitenda. Kana tisina kutenda kuzvokwadi iyi, tinova nekubatwa nekuchiva kwenyama, pamwe nemhuri dzedu, uye izvi zvinotidzivirira kubva pakufamba naShe. Nyama yedu yakanetekara kwazvo, zvekuti kunyange nevemhuri dzedu havangagoni kutibatsira kuti timutevere. Ishe badzi ndivo vanogona kutibatsira. Asi zvino takaroverwa kunyika. Ko munhu akafa angagona kubatsira vanhu venyika sei pamhaka dzenyika? Vanhu vakafa, munyika muno, havangagoni kuva varidzi vezvinhu zvenyika.
Jesu akave nokumutswa. Kumuka kwake kwakatitendera kuti tive nekuzvarirwa patsva kuupenyu hutsva hwepamweya. Pano tine basa idzva, mhuri itsva, netariro itsva. Tisu vanhu vacho vakazvarwa patsva. Isu, sevarwi vekudenga, tine basa rokuparidzira shoko raMwari. Pauro akapupura kuti akava munhu kuburikidza nokubatsira vamwe kuti vave nokuwana ruponeso, kwete kuburikidza nenzira dzenyama, asi kuburikidza nenzira dzepamweya. Akataura kuti akatofa nechekare, uye akave nekuzvarwa patsva kuburikidza naJesu Kristu. Ngatishingaire kuti tive vanhu vakashinga kupavo kupupura kwakadaro kwekudavira kwedu.
Pauro akati, muna VaGaratia 6:17-18, “Kubvira zvino ngakurege kuva nemunhu unondibata; nokuti ndinamavanga aJesu pamuviri wangu. Nyasha dzaShe wedu, Jesu Kristu, ngadzive noMweya wenyu, hama dzangu. Ameni.” Pauro akava nemavanga aShe Jesu. Haana kutaririra hutano hwake pana Mwari, kuti ave nokufamba noMweya. Akanga asisagoni kunyora, sezvaakazotadza kuona, mushure menguva. Saka hadzisi Tsamba shoma dzaPauro, idzo dzakave nokunyorerwa nevafambidzani vake, vakaita saTertiyasi, apo aitaura mashoko aMwari. Kunyange zvazvo akanga asisina simba panyama, akafara kuve nokukwanisa kufamba noMweya, akati, “Saka hatineti, kunyange munhu wedu wokunze uchipera hawo, munhu womukati unovandudzwa zuva rimwe nerimwe” (2 Vakorinte 4:16).
Pauro akatiyambira kuti tive rudzi rwevanhu avo vanofamba noMweya. Akavavo nokuti, “Kufamba noMweya zvinoreva kuraramira evhangeri.” Iwe neni tinofanira kuzviisa mupfungwa kuti kufamba noMweya zvinomborevei. Hatifanire kubatira zvinhu zvisina maturo, uye pachinhambo ichi, tinofanira kushumaira pamwe nekuraramira evhangeri. Ngatifambe noMweya, nokutenda, pahupenyu hwedu hwose.
Zvino, kuburikidza nokudavira kuevhangeri yemvura noMweya, Mweya womene uri mukati memoyo yedu. Mwari vanova nokupindura norufaro, kana tikanamata sezvinobva paevhangeri. Kuti kuita chibereko cheMweya zvinoreva kuti kufamba noMweya, nokudzikinura moyo. Unogona kuita zvibereko choMweya, zvinoti; rudo, nomufaro, norugare, nomoyo murefu, nomoyo munyoro, nokunaka, nokutendeka, novunyoro, nokuzvidzora, kana ukave nokufamba noMweya, uye nokuraramira evhangeri. Kuti tive nokuparidzira evhangeri yemvura noMweya, tinofanira kutambudzika, kuramba tine kuregerera, kuita moyo munyoro, uye kuitira zvakanaka kune avo vakarasika.
Zvibereko zvoMweya zvinova nekubereka kune avo vanoponesa moyo yakarasika, kuburikidza nokuita zvakanaka, uyevo nokuparidzira evhangeri inovaita kuti vave nokugamuchira kugara kweMweya Mutsvene. Izvi ndizvo zvazvinotora kuti uve nekuita zvibereko zvoMweya, uyevo kuti uve nekufamba noMweya.